Ungazisonga njani izipho zeKrisimesi ngomboniso ongcono | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ungazisonga njani izipho zeKrisimesi
Njengoko kufuneka uyazi, indlela esiyiyo thaca imveliso, ukutya okanye nayiphi na into ifuthe kwimbono yethu elungileyo okanye engalunganga. Impembelelo yokuqala kukuba, kwiimeko ezininzi, ibaluleke ngakumbi kunesipho ngokwaso. Inkqubo ye- "njengo" ingadlula "Intoni".
Ukuba ujonga iimveliso ezininzi ukuba uninzi lwazo, bachithe inxalenye yohlahlo-lwabiwo mali ekupakisheni nako konke oko kuthetha. Sibhekisa kutyalo-mali abalwenzayo kuphando, kuyilo nakwimveliso.
1 Yenza isipho esisongelwe kakuhle
2 Ndingayifumana njani ipakethe efanelekileyo okanye intetho?
3 Sebenzisa iibhokisi njengesisongelo sesipho
4 Kulabo bethu abanikezela ngamatikiti okanye amatikiti: iimvulophu ezizezakho
5 Iingxowa zephepha ezinomtsalane
6 Ibhasikiti ehamba phambili kwizipho zeqela
Yenza isipho esisongelwe kakuhle
Kuya kufuneka sicinge ngakumbi njengophawu lwentengiso kwaye sinike isipho sethu ukubaluleka okusifaneleyo ukuze sibonakale. Oko kuthetha ukuba kufuneka sisebenze intetho, yonke i iinkcukacha zidibanisa. Into yokuqala yokuyiphepha ngamaphepha akumgangatho ophantsi wesipho, angasiboneleli ngayo nantoni na, anokuthabatha. Bayadinwa kwaye bayalila banika iphakheji yethu ukubukeka okuthe tyaba.
Ndingayifumana njani ipakethe efanelekileyo okanye intetho?
Sikunika impendulo kweli nqaku, kwaye wehlise umoya kuba sineentlobo zonke:
Izinto ezinkulu nezincinci.
Izipho nge Iimveliso ezininzi.
Amatikiti okanye amatikiti kweminye imiboniso.
Isongelwa abo baninzi ixesha.
Veza izimvo kwabo bangenako ukutyala ixesha elininzi okanye abanazo izakhono zobugcisa.
Sebenzisa iibhokisi njengesisongelo sesipho
Sinokusebenzisa iibhokisi ukuze isipho sethu sikhuselwe, kwaye ngendlela, yonke into iyafana ngakumbi kwaye intle. Kwakhona, ukuba isipho sethu sinezinto ezininzi yindlela efanelekileyo yokuzibeka ngokwamaqela. Le ndlela ikwasinceda ukuba asinalo ixesha elininzi, nangona sinokunikezela ngexesha kwaye sikwenze kugqitywe ngakumbi. Masibone ezinye izimvo ukuze ibhokisi yethu ilishumi.
Singa Gcwalisa nge Ukucheba iphepha o iplastiki. Olunye ukhetho kukusebenzisa iphepha letishu, ilula kakhulu kwaye iluhlobo oluncinci lephepha. Uncedo lwayo olukhulu, kule meko, kukuba ngenene kulula ukuphatha. Zonke ezi zinto unako ukuthenga en izitolo ze-intanethi okanye naphi na kwi izinto o indawo yokuthengisa.
Ukunikeza umbala ngakumbi kunye nokubaluleka kweendawo ezinye iilekese o Izinto ezilungileyo. Siyakwazi nokuvuya kunye iipompo ezinemibala. Masifumane isiphumo sokugcwalisaOko kukuthi, kugqityiwe ngakumbi. Umbono kukuba xa umntu ofumana isipho evula ibhokisi, banayo Ndiziva ndizele. Ngokubonakalayo uza kuphumelela, iya kujongeka isebenza, igqibelele kwaye inomdla.
Kulabo bethu abanikezela ngamatikiti okanye amatikiti: iimvulophu ezizezakho
Ukuba isipho sakho liphepha kuba uyiprintile amathikiti ukuya kwindawo yokubonela, ibhola ekhatywayo okanye nawuphi na omnye umsitho kwaye uza kuyifaka ngaphakathi phezu tyaba kwaye uyadika, Sicebisa ukuba uqhubeke ufunda kuba oku Hamba a inzala.
Sukuyilungiselela kwaye uyisongele ubude besipho sakho. Bangayiguqula imvulophu yakho ibe ngumsebenzi wobugcisa. Kule mihla, unako Guqula imvulophu ibe ngumqondiso weKrisimesi okanye isimilo. Sishiya imibono ethile, kwaye asidinwa kukuphinda-phinda ukuba kukho onke amatyala. Imizekelo elula y ezinye zicacisa ngakumbi kwabo banexesha kwaye bonwabele ubugcisa. Naku sisiya!
Ezi mvulophu zi yenziwe ngesandla. Siza kusebenzisa amakhadi anemibala eyahlukeneyo ekufuneka siyinqumle siyinike imilo efanelekileyo ukuze kamva iwanamathelise ngendlela eza kuthi ifumane abalinganiswa beKrisimesi abohlukileyo. Kule meko sikubonisa Ixhama. Kulula ukuzenza, kuba ukuba siyathenga Imvulophu emdaka, kufuneka siyigqibe ngeenkcukacha ezimbalwa:
Iimpondo umbala omdaka ngombala owahlukileyo kunemvulophu. Kwimeko imvulophu yethu imdaka ngombala omnyama, siya kusebenzisa ithoni elula yeempondo kunye nokunye.
Los amehlo Siza kubenza nekhadibhodi emhlophe esikwe yimiqolo. Ngaphakathi kuzo siza kunamathela kumacandelo amancinci omnye umbala. Singazoba nesimakishi.
La Impumlo ebomvu Yeyona nto ichukumisayo yomlinganiswa. Siza kuyibeka kwicala elingasemva elingunxantathu.
Olunye uluvo, endicinga ngalo buqu yoqobo, Kukuphinda wenze i- Isanta claus yengubo o usanta Claus. Ngaphezulu elula ngaphezulu. Kule meko, siya kuthenga iimvulophu ezibomvu. Siza kusika umcu omnyama kumnyama ukuphinda senze kwakhona ibhanti yesinxibo kunye noxande lwegolide lwe bopha. Siyincamathisela kwaye sele sinemvulophu yokuyila kunye neKrisimesi. Njengoko sibona emfanekisweni, sinako ubhale el -nombre lomntu oza kufumana isipho embindini.
IPodemos uhombise iimvulophu ngezinto ezihombisayo okanye abalinganiswa beKrisimesi. Sine ukhetho lokuzoba okanye wenze ukwenziwa ngekhadibhodi, okanye khuphela umfanekiso ukusuka kwi-intanethi kwaye uncamathisele. Ngaba ngokukhawuleza ukwenza kwaye iziphumo, njengoko sibona emfanekisweni, zilungile.
Kwaye ngokuqinisekileyo olona khetho lufunwayo izolandela. Ilungiselelwe bonke abo awunaxesha laneleyo okanye awulungelanga ubugcisa. Ezi Iimvulophu ziyakhutshelwa, ke, kuya kufuneka ujongane ne iidilesi esiza kuzifumana apha ngezantsi y khuphela iitemplate. Phrinta, sika kwaye uncamathisele. Iya kukuqinisekisa ukuba uyilo oluhle kunye noqobo.
ikhonkco Iyakhutshelwa kaSanta Claus.
ikhonkco Iyakhutshelwa Umntu weqhwa.
Iingxowa zephepha ezinomtsalane
Ukuba sithenga izipho kwivenkile baya kusinika ibhegi enophawu ngaphandle. Sicebisa ukuba utshintshe ibhegi ibe yenye efanelekileyo kwi Imihla yeKrisimesi.
Zininzi iingxowa ezihonjisiweyo Iimpawu zeKrisimesi esinokuthi sizenze buy yenziwe, kodwa ukuba ufuna ukumakisha isipho esihle se-DIY onakho uhombise ibhegi yephepha elula ngokwakho. Kufuneka uthenge kuphela iibhegi zamaphepha emdaka, ezo zobomi kwaye uvumele umbono wakho ubhabhe. Unokufaka ezinye izimvo esizishiya zenze iikhadikhadi zeKrisimesi ezingxoweni. Ukungena apha ukuya eposini.
Lo ngumzekelo olula esiwubone ngaphambili ukwenza amakhadi eposi eKrisimesi. Imalunga Ukuguqula ibhegi ebusweni bukaSanta Claus. Njengoko ubona, sinokuyisebenzisa kuninzi ezinye iifomati:
Ibhasikiti ehamba phambili kwizipho zeqela
Kwimeko apho sinezinto ezininzi njengezipho, kwaye singazi ukuba sizidibanisa njani, sinokwenza eyethu ibhasikithi. Ngendlela ye- iqashiso lekrismesi. Umbono kukuba yonke into ihleli ibekwe kakuhle ukuze ingashukumi kwaye zibonakala zilungile. Singasebenzisa, njengebhokisi, a Gcwalisa imvelaphi. Siza kubeka zonke izinto ngobuchule, kwaye ekugqibeleni siya kusonga nge iphepha elibonakalayo esivumela ukuba sibone ngaphakathi.
Ekugqibeleni, Siya kubopha ngentambo. Singongeza bopha okanye ibhola (esijinga emthini) ukuyinika ikrismesi kunye nokuxhoma ithegi enegama lomamkeli.
Kwimeko apho sibona ukuba ngaphakathi asinanto kwaphela, sinokubeka ezinye Unodoli weKrisimesi okanye i-nougat for usete ibhaskiti kwaye uyinike ngakumbi uKrisimesi.
Ukuba ukunqongophala kwezimvo ayisosizathu sokwenza le Khrismesi ukubonisa izipho zakho ngeyona ndlela ibhetele. IKRISMESI EMNANDI!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ungazisonga njani izipho zeKrisimesi